Tontolo Arabo: Misioka ny Traikefa Hajj · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2018 9:24 GMT
Tamin'ireo Miozolomana 1,8 tapitrisa manao fivahiniana masina, na Hajj, mankao amin'ny tanàna masin'i Mecca, nanana fotoana vitsivitsy nangalarina izy ireo mba handefasana hafatra amin'ny tarehintsoratra miisa 140 ho an'izao tontolo izao. Ireto misy sombintsombiny avy amin'ny resaka tao amin'ny tontolon'ny Twitter.
Bahrainita Hassan Zainal nanoratra hoe:
Ary nanoro hevitra izy hoe:
Eto izy dia mampiseho antsika ny tapakila ho an'ny Metro mankany Mecca, tolotra fiara-dalamby vaovao 2 miliara dolara, izay mitondra ireo mpanao fivahinianana masina any amin'ny toerana masina samihafa.
Ny tolotra fiarandalamby, izay natokana ho an'ny Saodiana sy ireo olom-pirenen'i Golfa hafa tamin'ity taona ity, dia nodoran'ny mpivahiny masina avy any amin'ny firenen-kafa, izay tsy navela hampiasa ny tolotra. Ny Filan-kevitry ny Fiarahamiasan'ny Golfa dia ahitana an'i Arabia Saodita, Bahrain, Koety, Oman, Qatar ary Emirà Arabo Mitambatra (UAE)
Avy any Qatar, Shabina manontany hoe:
Ahoana ny momba ny vahoaka madinika ao amin'ny Hajj? RT @omarc Manomboka androany ho an'ireo Saodiana sy olom-pirenena Golfa ny Metro Mecca
Ao anatiny ihany koa i mmbilal, avy any Doha, Qatar. Ao izy mitantara ny Hajj ao amin'ny Al Jazeera amin'ny teny anglisy. Misioka izy hoe:
Vao avy tonga eto jeddah – tsy misy tebiteby – mba hitantara ny #hajj2010 ho an'ny @ajenglish! Olana kely tao doha mikasika ny fahazoan-dàlana hivoaka, saingy efa milamina tsara daholo izao.
Nizara sary tao amin'ny siokany ihany koa izy. Faritana tahaka izao manaraka izao ity sary ity:
Ary ny soratra ao amin'ny sary manaraka dia mivaky hoe:
Mpisioka hafa momba ny Hajj ilay Ejiptiana Mohamed, izay mizara ny fandinihany ato. Amin’ity sioka ity izy mampiseho ankizilahy iray manana olana:
Ary eto dia mamazivazy ireo mpankafy ny tranonkala tambajotra sosialy Foursquare izy:
Hey @foursquare, vao avy nihaona tamin'ireo namana 3 tapitrisa aho. Mendrika “badge” vaovao mahafinaritra izany! #hajj #arafat #eidmubarak!
Ary farany, Tareq Fares, avy any UAE, mizara ity sary ity avy ao amin'ny Tendrombohitra Arafat:
Raha hijery sioka Hajj maro hafa, jereo ny #Hajj ato.